UNICEF Somalia - Media centre - Midowga Yurub ayaa bixiyey €3 milyan oo euro isaga oo sii wada taageeradiisii muhiimka ahayd ee uu siinayey haweenka iyo carruurta ay saameysey abaarta dabadheer ee Soomaaliya
Midowga Yurub ayaa bixiyey €3 milyan oo euro isaga oo sii wada taageeradiisii muhiimka ahayd ee uu siinayey haweenka iyo carruurta ay saameysey abaarta dabadheer ee Soomaaliya
MUQDISHO, 4ta Abriil 2018 – Midowga Yurub, oo u soo marinaya waaxda Ilaalinta Madaniga iyo Gargaarka Bani’aadamnimada ee Guddiga Reer-Yurub, ayaa €3 milyan oo euro siiyey hawlaha bani’aadamnimada ee UNICEF ay siineyso carruurta iyo haweenka ay saameysey abaarta daba-dheeraatey ee Soomaaliya.
Ka dib markii ay xilliyo badan ay baaqdeen roobabkii ayna ku baaba’een dalagyo, xoolo iyo maciishado, ayaa 2dii Febraayo 2017dii uu Xiriiraha Qaramada Midoobey ee hawlaha bani’aadamnimada uu soo saarey digniin hore oo uu kaga digayo macluul ku soo wajahan Soomaaliya. Ka dib markii iyada oo ay hoggaaminayaan maamullada ayna taageereyso bulshada caalamka goor hore kor loo qaadey waxqabadka ayaa waxaa lagu guuleystey in la baajiyo macaluushii. Haseyeeshee, ilaa 5.4 milyan qof ayaa weli u baahan gargaar bani’aadamnimo, kuwaas oo ay ka mid yihiin 2.8 milyan oo carruur ah.
Dhibaatooyinka ayaa sababey in ay dillaacaan jadeeco iyo daacuun, kala saameeyey 20,000 iyo 78,000 waa sida ay u soo kala horreeyaane, dadkaas oo badidoodu ay ahaayeen carruur. In ka badan 3 milyan oo carruur ah, oo ka mid ah carruurta dalka oo ay wadartoodu tahay 4.9 milyan, ayaa iskuul dhigan dhammaadkii sanadka, waxaana kor u kacay tacaddiga ku saleysan jinsiga ee loo geysto haweenka iyo carruurta.
Deeqdan cusub waxaa ay UNICEF awood u siineysaa in ay daaweyn naf badbaadin ah u sameyso carruurta ay hayso nafaqo-xumada aadka u ba’an; ku soo iibiso sahayda biyaha, fayadhowrka iyo nadaafadda (WASH) si ay bulshooyinka gacan uga siiso ka hortagga in ay cudurro dillaacaan; gacan siiso carruurta iyo haweenka uu saameeyey tacaddiga ku saleysan jinsiga iyo carruurta aan qof weyn la socon iyo carruurta ay kala maqan yihiin qoyskooda; ayna hubiso in carruur ay soo barokicisey abaartu ay helaan goobo waxbarasho oo ay bedqab ku helaan laguna ilaaliyo si ay u sii wataan waxbarashadooda.
Midowga Yurub oo ah mid ka mid ah deeq-bixiyeyaasha ugu waaweyn ee UNICEF Somalia ayaa muddaba kaalin mug leh kaga jirey badbaadada iyo wanagga haweenka iyo carruurta Soomaaliyeed. Sanadkii 2017dii, maaliyadda bani’aadamnimada ee Midowga Yurub waxaa ay UNICEF awood u siisey in ay 43,000 carruur ah oo ay ku dhacdey nafaqo-xumo aad u ba’an ay gaarsiiso daaweyn naf-badbaadin ah, iyo in ay 11,000 bukaan, oo badidoodu carruur ahaayeen, ay gaarsiiso daaweynta shuban biyoodka ba’an/daacuunka.
“Midowga Yurub iyo la-hawlshasyaashiisa bani’aadamnimada ayaa gacan ka geystey ka-hortagga macluul sanadkii 2017; kumanaan carruur Soomaaliyeed ah ayaa laga badbaadiyey in ay macno la’aan u dhintaan,” ayaa uu yiri Christos Stylianides oo ah Guddoomiyaha Guddiga Reer Yurub ee Gargaarka Ban’aadamnimada iyo Wax-ka-qabashada Dhibaatooyinka. “Laakiin waxaa cad in qoysas badan oo Soomaaliyeed ay weli yihiin kuwo nugul abaaraha iyo barokaca aan kala go’an lahayn daraaddood. Iyada oo loo marayo wada-shaqeyntan cusub ee aan la leenahay UNICEF, ayaa Midowga Yurub waxaa mar walba ka go’an in uu gacan siiyo carruurta iyo haweenka ay raadka ugu weyn ku yeesheen dhibaatooyinkan.”
“Waxaan jeclahay in aan si weyn ugu mahadceliyo Midowg Yurub iyo dadweynaha Dalalka Xubnaha ah. Deeqsinimadooda ayaa UNICEF u oggolaaneysa in ay gacan siiso kumanaan carruur ah iyo qoysaskooda oo dhexda u galey abaar dabadheer,” ayaa ay tiri Leila Pakkala, oo ah Agaasime-Goboleedka UNICEF ee Bariga iyo Koonfurta Afrika. “Maaliyaddan waa mid la heley waqtigii loo baahnaa waana mid uu ka dhalanayo waxqabad degdeg iyo taabogalba ah. Waxaa ay gaar ahaan gacan ka geysaneysaa in 12,500 carruur ah la siiyo daaweyn naf-badbaadin ah oo looga daaweynayo nafaqo-xumo aad u ba’an, iyo in dad gaaraya rubuc malyuun la siiyo sahayda WASH oo loogu talogaley xaaladda degdegga ah. Iyada oo la saadaalinayo in mar kale ay roobabka da’aya ay yaraan doonaan, ayaa xaaladdu weli tahay mid cakiran. Waxaa la joogaa waqtigii ay dhammaan wada-hawlgalayaashu ay si degdeg ah uga wada shaqeyn lahaayeen wax ka qabashada baahida carruurta iyo qoysaska ugu nugul ee Soomaaliya, si aan hadda u badbaadino naftooda una sii wadno gacan ka geysashada xoojinta adkeysigooda.”
Ku saabsan UNICEF
UNICEF waxaa ay Soomaaliya ka shaqeyneysey tan iyo 1972dii markaas oo xafiiskeedii ugu horreeyey ay ka furatey Muqdisho. Maanta UNICEF waxaa ay xafiisyo ku leedahay Muqdisho, Baydhabo, GAroowe iyo Hargeysa. Annaga oo kaashaneyna in ka badna 100 NGO-yo caalami ah iyo kuwo maxalli ah iyo ururrada ku dhisan bulshada, ayaa UNICEF waxaa ay bixisaa adeegyo dhinaycada Caafimaadka, Nafaqada, Biyaha, Fayadhowrka iyo Nadaafadda, Waxbarshada iyo Ilaalinta Carruurta isugu jira, waxaana ay wax ka qabataa xaaladaha degdegga ah, waxaana ay bixisaa taageero dhinaca nabad-dhisidda iyo horumarinta ah.
Ku saabsan Waaxda Ilaalinta Madiniga iyo Gargaarka Bani’aadamnimada ee Midowga Yurub
Midowga Yurub iyo Dalalka Xubnaha ka ah ayaa ah kuwa ugu badan ee bixiya gargaarka bani’aadamnimada dunida oo dhan.
Gargaarka bani’aadamnimadu waxaa uu muujinayaa sida ay dadka Reer Yurub u garab-taagan yihiin dadka gargaarka u baahan ee guud ahaan dunida. Waxaa looga danleeyahay in lagu badbaadiyo nafo, looga hortago laguna yareeyo silica aadanaha, laguna ilaaliyo karaamada iyo sharafta aadanaha ee dadka ay saameeyeen aafooyinka dabiiciga ah iyo dhibaatooyinka dad-sameega ah.
Guddiga Reer-Yurub waxaa uu hubinayaa in si degdeg ah oo taabogal ah loo bixiyo gargaarka Midowga Yurub iyada oo loo marayo labada qaab ee ugu waaweyn ee uu adeegsado: ilaalinta madaniga iyo gargaarka bani’aadamnimada.
Guddiga Reer Yurub, isaga oo u maraya waaxdiisa Gargaarka Bani’aadamnimada iyo Ilaalinta Madaniga ah (ECHO), waxaa uu sanad kasta gacan siinayaa 120 milyan qof oo ah dhibbanayaal colaadeed iyo aafooyin.
Waaxda ilaalinta madaniga iyo hawlgallada gargaarka bani’aadamnimada ee Guddiga oo xarunteeda dhexe ay tahay Brussels oo xafiisyo hoos yimaadana ku leh dunida oo dhan, waxaa ay gargaar ku saleysan baahiyaha bani’aadamnimada siisaa dadka ugu nugul.
Macluumaad dheeri ah, fadlan ka eeg barta internet-ka ee Guddiga Reer Yurub (European Commission).